Isicwangciso sikaBayer sokuzinzisa amabango omhlaza we-Roundup kwikamva sijamelene nenkcaso-e-US Ilungelo Lokwazi
ezaposwa ngomhla Februwari 26, 2021 by UCarey Gillam
Uninzi lweefemu zomthetho zaseMelika zenze umanyano ukuze zilwe new $ 2 billion Isindululo sokuhlala ngumnini weMonsanto uBayer AG ojolise ekuqulathe uxanduva oluqhubekayo lwenkampani olunxulumene namabango athi iRoundup herbicides ibangela uhlobo lomhlaza owaziwa ngokuba yi-non-Hodgkin lymphoma (NHL).
Indawo yokuhlala yenzelwe ukubuyekeza abantu abaye bavezwa kwiimveliso zeRoundup kwaye sele benayo iNHL okanye banokuphuhlisa i-NHL kwixa elizayo, kodwa abangekathathi manyathelo okufaka isimangalo.
Iqela elincinci lamagqwetha abeka esi sicwangciso kunye neBayer athi "izakusindisa ubomi" kwaye ibonelele ngezibonelelo ezibonakalayo kubantu abakholelwa ukuba baphuhlise umhlaza ngenxa yokuvezwa yimveliso yenkampani yokubulala ukhula.
Kodwa amagqwetha amaninzi agxeka esi sicwangciso athi ukuba samkelwe sizakubeka umzekelo oyingozi kwezinye iintlobo zamatyala ezibandakanya inani elikhulu labantu abonzakele ziimveliso okanye iinkqubo zemibutho enamandla.
“Ayilulo ulwalathiso esifuna ukuba luhambe inkqubo yezomthetho,” latsho igqwetha uGerald Singleton, inkampani yakhe ethe yazibandakanya namanye amafemu angaphezulu kwama-60 aphikisana nesicwangciso sikaBayer. "Akukho meko apho oku kufanelekileyo kubamangali."
Isicwangciso sokuhlawulwa kukaBayer safakwa kwiNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseMantla saseCalifornia ngoFebruwari 3, kwaye kufuneka samkelwe yiJaji yeSithili sase-US uVince Chhabria ukuze isebenze. Isicwangciso sokuhlawulwa kwangaphambili esangeniswa kunyaka ophelileyo sasikhona ugculelwe nguChabria emva koko warhoxa. Ijaji ibijongile isimangalo esimalunga ne-multidistrict Roundup yezimangalo ezibandakanya amawaka abenzi bamacala abavela eUnited States.
Iimpendulo kwisicwangciso sokuhlawula zilindeleke nge-3 ka-Matshi kwaye ukumanyelwa kwetyala kulungiselelwe uMatshi 31.
Eyona nkxalabo iphambili kukuba abasebenzisi beRoundup bangoku abanokuba nomhlaza kwaye bafuna ukumangalela kwixa elizayo baya kuba phantsi kwemiqathango yokuhlaliswa kweklasi ngaphandle kokuba baphume ngokusesikweni kwithuba elithile. Elinye lamagatya abaza kuxhomekeka kuwo liya kubathintela ekufuneni ukonakaliswa kwesohlwayo nakuliphi na ityala elizayo.
La magama kunye neminye ebekiweyo ayilunganga kwaphela kubasebenzi basezifama nakwabanye ekulindeleke ukuba baphuhlise umhlaza kwixesha elizayo ukusuka ekuvezweni yimveliso yenkampani yokubulala ukhula, ngokwe-Singleton. Isicwangciso siyanceda iBayer kwaye ibonelela "ngemali yegazi" kumashishini amane omthetho asebenze neBayer ukuyila esi sicwangciso, utshilo.
Ezi femu zisebenza neBayer ukuyila kunye nokulawula isicwangciso ziya kufumana isindululo se- $ 170 yezigidi ukuba isicwangciso siqala ukusebenza.
U-Elizabeth Cabraser, elinye lamagqwetha aqulunqa indawo yokuhlala ecetywayo, uthe ukugxeka akuyiyo inkcazo efanelekileyo yendawo yokuhlala. Ngokwenyani, uthe, esi sicwangciso “sinika ukufikelela okubaluleke nangxamisekileyo okufunekayo, imfundo, ukufikelela kukhathalelo lwempilo, kunye neenzuzo zembuyekezo” kubantu abaye bavezwa kukutshabalalisa ukhula lweMoldanto's Roundup kodwa bengekaphuhlisi i-non-Hodgkin lymphoma (NHL).
"Sifuna ukuvunywa kule ndawo yokuhlala kuba izakusindisa ubomi kwaye inyuse umgangatho wobomi ngokufumanisa isifo kwangoko, incede abantu… ibazise kwaye yonyuse ulwazi loluntu malunga nonxibelelwano phakathi kweRoundup neNHL… utshilo.
Isithethi seBayer asiphendulanga kwisicelo sokuphawula.
Indawo entsha ecetywayo ijolise kumatyala exesha elizayo kwaye yahlukile kwi-11 yezigidigidi zeedola iBayer ibekelwe ukuhlawula amabango omhlaza asekhona e-US. Abantu abachaphazeleke sisindululo sokuhlaliswa kweklasi ngabantu ababonakalisiweyo kwiRoundup kodwa abakabikho kwisimangalo kwaye abathathanga manyathelo.
Nangona esi sivumelwano sicetywayo sithi "sijongana nezinto ezine ezixoxwe yiNkundla malunga nesivumelwano sangaphambili, kurhoxisiwe," u-Singleton kunye namanye amagqwetha abandakanyekayo kwiqela eliphikisayo bathi esi sicelo sitsha sisibi njengokuqala.
Ukongeza kwinkxalabo yokuba amalungu eklasi ngekhe abe nelungelo lokufuna amabango omonakalo owohlwayayo, abagxeki bayaphikisana neminyaka emine "yokuma" yokuthintela ukufakwa kwamatyala amatsha. Abagxeki bathi isicwangciso sokwazisa abantu ngendawo yokuhlala asonelanga. Abantu bangaba neentsuku ezili-150 belandela isaziso sokuba “baphume” eklasini. Ukuba abakhethi, ngokuzenzekelayo baya eklasini.
Abagxeki bayaphikisana nokwenziwa kwephaneli yesayensi eya kuthi isebenze njenge "isikhokelo" sokwandisa ukhetho lwembuyekezo kwixesha elizayo "kunye nokubonelela ngobungqina malunga ne-carcinogenicity - okanye hayi - ye Bayer yeherbicides. Ngokunikwa imbali ebhaliweyo kaMonsanto yokuxhaphaza iziphumo zophando lwenzululwazi, umsebenzi wepaneli yesayensi uza kuba kurhanelwa, utshilo uSingleton.
Ixesha lokuqala lokuhlawula liza kuqhuba ubuncinci iminyaka emine kwaye linokwandiswa emva kwelo xesha. Ukuba iBayer inyula ukungayiqhubeli ingxowa mali yembuyekezo emva kwexesha lokuhlawula kuqala, iyakuhlawula i $ 200 yezigidi eyongezelelweyo njenge "ntlawulo yokugqibela" kwingxowa mali yembuyekezo, isishwankathelo sokuhlawula sithi.
“Imbuyekezo enkulu” inikezelwe
Iifemu zomthetho ezayila isivumelwano kunye neBayer bathetha ngokufaka kwabo enkundleni ukuba indawo yokuhlala yenzelwe ukubonelela abo bangabamangali kwixesha elizayo "ngezona zinto zibanceda kakhulu," kubandakanya ukhetho lwembuyekezo enkulu ukuba baphuhlisa i-non-Hodgkin lymphoma. .
Isicwangciso sifuna ukusekwa kwengxowa-mali yembuyekezo yokwenza amabhaso aphakathi kwe- $ 10,000 kunye ne- $ 200,000 kwilungu ngalinye leklasi. "Amabhaso okuHlawula aKhawulezileyo" ama- $ 5,000 ayakufumaneka ngesantya esikhawulezileyo, efuna nje ukuboniswa kokubhengeza kunye nokuqonda isifo.
Abo bantu baqala ukuvezwa kwiimveliso zeRoundup ubuncinci iinyanga ezili-12 ngaphambi kokuchongwa kwabo baya kufaneleka ukufumana amabhaso. Amabhaso angaphezu kwe- $ 200,000 anokwenziwa "ngeemeko ezingaqhelekanga." Amalungu eklasi afanelekileyo afunyaniswe ene-NHL ngaphambi kukaJanuwari 1, 2015, ngekhe afumane amabhaso ngaphezulu kwe- $ 10,000, ngokwesicwangciso.
Esi sivumelwano siza kubonelela ngengcebiso yasimahla kwezomthetho kwaye sinikezele "ngenkxaso ukunceda amalungu eklasi ekuhambeni, ekubhaliseni nasekufakeni izicelo zenzuzo yokuHlaliswa."
Ukongeza, isindululo sichaza ukuba indawo yokuhlala iya kuxhasa ngemali uphando kunye nonyango lwenzululwazi ekuchongeni nasekunyangeni i-NHL.
Ngokuqaphelekayo, esi sicwangciso sithi akukho mntu uzakuphulukana nelungelo lakhe lokumangalela ngaphandle kokuba ukhetha ukwamkela imbuyekezo kwingxowa-mali yembuyekezo, kwaye akukho mntu kufuneka enze olo khetho de elo lungu ngalinye leklasi lifumaneke ukuba line-NHL. Abayi kuba nakho ukufuna isohlwayo somonakalo kodwa banokufuna enye imbuyekezo.
“Nawaphi na amalungu eklasi angafaki ibango kwaye amkela imbuyekezo yomntu ngamnye agcina ilungelo lakhe lokumangalela iMonsanto ngenjongo yokuhlawula ngomonakalo owenzekileyo kuyo nayiphi na ithiyori yezomthetho, kubandakanya ukwenzakala komntu, ubuqhetseba, ukumela into engeyiyo, ukungakhathali, ukufihla ubuqhetseba, ukumela kakubi, ukophula iwaranti, intengiso engeyonyani , kunye nokwaphulwa kwalo naluphi na ukhuseleko lwabathengi okanye izenzo ezingalunganga nezikhohlisayo okanye umthetho, ”esi sicwangciso sithi.
Ukwazisa abantu ngendawo yokuhlala eklasini, izaziso ziya kuthunyelwa ngeposi / nge-imeyile kwiifama ezingama-266,000, amashishini kunye nemibutho kunye namaqumrhu aseburhulumenteni apho iyeza lenkampani inokusetyenziswa kunye nabantu abangama-41,000 abangenayo iHodgkin lymphoma kwaye bacelwe ukuba bafumane ulwazi malunga nesifo sabo. Ukongeza iiposta ziya kuthunyelwa ngeposi kwiivenkile ezingama-2,700 zibacele ukuba bathumele izaziso malunga nokuhlala kwabantu eklasini.
Njengenxalenye yolu hlulo lucetywayo, uBayer uthe uza kufuna imvume kwi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) yokongeza ulwazi kwiileyibhile zeemveliso zayo ezisekwe kwiglassifate ezifana neRoundup eya kuthi ibonelele ngonxibelelwano lokufikelela kwizifundo zesayensi kunye nolunye ulwazi malunga neglyphosate ukhuseleko. Kodwa abagxeki bathi ukubonelela ngewebhusayithi amakhonkco akonelanga kwaye iBayer kufuneka ibeke isilumkiso esingqalileyo somngcipheko womhlaza kwiimveliso zokubulala ukhula.
Isindululo sokulungiswa kwamanyathelo eklasi sisoyikiso ekuchaphazeleni “amakhulu amawaka okanye kwanezigidi” zabantu abaye bachaphazeleka kwiRoundup kwaye "baphakamisa 'imibuzo eyodwa' kunye nenzulu" phantsi koMgaqo-siseko wase-US, ngokwe ukugcwaliswa kwenkundla ngokuchasene nesicwangciso seBayer esenziwe ligqwetha labamangali u-Elizabeth Graham.
U-Graham uxelele inkundla ukuba ukuba esi sicwangciso samkelwe sinokuba "nefuthe elimangalisayo kungekuphela kwesi simangalo, kodwa nakwikamva lesityholo setyala."
Umbutho weSizwe wamaFama abaNnyama (NBFA) ulinganise umba ngoLwesithathu, ungenisa ukufayilwa ixesha elide kunye nenkundla ka Chhabria ethi "inani elininzi" lamalungu ayo angaphezu kwe-100,000 "aye achaphazeleka kwaye angonzakaliswa yi-Roundup, kunye nesithako sayo esisebenzayo i-glyphosate."
Uninzi lwamafama sele ephuhlisile i-non-Hodgkin's lymphoma abayibek 'ityala ekusetyenzisweni kweRoundup, kwaye "uninzi loloyiko lokuba kungekudala baya kuba neempawu," i-NBFA filing ithi.
I-NBFA ifuna ukubona iimveliso zeRoundup zisuswa kurhwebo okanye kolunye utshintsho olwenziwe ukukhusela amafama, i-filing ithi.
Iinkxalabo ze-NBFA kufuneka ziqwalaselwe yinkundla, ngakumbi njengoko iBayer ijonge "ukulungisa isenzo seklasi kunye neqela lamagqwetha athi amele umdla wabo bonke abalimi abachanabeke kwi-Roundup kodwa okwangoku ibangela umhlaza. ”
Amacala omthetho e-Australia
Njengoko iBayer isebenza ukuphelisa ukumangalelwa eRoundup eMelika, inkampani ikwajongana namabango afanayo ngabalimi nakwabanye eOstreliya. Isenzo esenziwe kwiklasi ngokuchasene neMonsanto siyaqhubeka, kwaye ummangali okhokelayo uJohn Fenton, owafaka isicelo seRoundup njengenxalenye yomsebenzi wefama. UFenton wafunyaniswa ukuba une-non-Hodgkin lymphoma ngo-2008.
Uthotho lwemihla ephambili sele isekiwe: IMonsanto ine-1 kaMatshi ukubonelela ngamaxwebhu okufumanisa kubameli babamangali kwaye ngoJuni 4 ngumhla obekiweyo wokutshintshiselana ubungqina bobuchwephesha. Amaqela kufuneka angene kulamlo ngoJulayi 30 kwaye ukuba akukho nto isonjululwe ityala liza kuxoxwa ngo-Matshi 2022.
UFenton uthe ngelixesha "angathanda eli thuba" lokuya kulingo aze abalise ibali lakhe, unethemba lokuba ulamlo luza kuwusombulula lo mba. "Ndicinga ukuba isivumelwano siyaqala ukutshintsha ukubulela kwinto eyenzekayo eMelika. Abalimi banolwazi kwaye ndiyakholelwa ukuba bathatha amanyathelo okhuseleko kunangaphambili.
UFenton uthe uyathemba ukuba iBayer ekugqibeleni izakubeka ilebhile yesilumkiso kwiMonsanto's glyphosate herbicides.
"Ubuncinane ngesilumkiso umsebenzisi angazenzela eyakhe ingqondo malunga ne-PPE (izixhobo zokuzikhusela) akhetha ukuyinxiba."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umhlaza, enkantolo, indawo, EPA, glyphosate, impilo, herbicides, ityala, zomthetho, IMonsanto, engeyiyo iHodgin lymphoma, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, ababulali bokhula
Disemba 1, 2020